यौन, युवा र उर्जाः सम्भोगदेखि समाधीतर्फ — Bhugolnews
एक्काइसौं शताब्दीका विचारक ओशो रजनीश (चन्द्र मोहन जोशी) को जन्म ११ डिसम्बर १९३९मा भएको थियो । आफ्नो जीवनकालमा उनलाई विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु र आध्यात्मिक शिक्षकका रुपमा हेरियो । उनले मानव जीवनको कामुताबारे खुलेर आफ्नो राय व्यक्त गरेकै कारण उनलाई ‘सेक्स गुरु’को संज्ञा पनि दिइयो । ओशोले ‘संभोगदेखि समाधीतर्फ’ को विचार व्यक्त गरे । अश्लिलता, कामुकता तथा युवाहरुलाई लिएर उनीबारे लामो समयसम्म एक किसिमको बहस समेत चलेको थियो ।
मनको सूत्र, मनको विज्ञान
पोस्टर हेर्न त्यही व्यक्तिमात्र जान्छन्, जसले स्त्री-पुरुषको शरीर देखेका छैनन् । जसले कहिल्यै पनि शरीरको सौन्दर्य देखेका छैनन्, जसले शरीरको सहजताको अनुभव गरेका छैनन् ।
पोस्टरहरु यिनै गुरुको कृपाले लगाइएको हुन्छ किनकी यिनीहरु स्त्री-पुरुषलाई भेट्न दिदैनन् । नजिक बस्न दिदैनन् । जसले गर्दा मानिसहरु फोहोरी किताब पढ्न, फोहर तस्वीर हेर्न तथा फोेहोरी फिल्म बनाउन बाध्य छन् । यस्ता फिल्म आफै उत्पत्ति पनि हुँदैन । यो भनेको मानिसको आवश्यकता हो ।
त्यसैले, प्रश्न यो हैन कि मानिसहरु फोहर फिल्म किन हेर्छन् रु प्रश्न यो हो कि मानिसको आवश्यकता के हो रु यस्ता किनकी यो पोस्टर सित्तैमा कसैले पनि लगाउँदैन । यसको पनि उपयोगिता छ । मानिसहरु यसलाई हेर्ने तयार छन् । बजारमा यसको माग छ ।
यो माग कसरी पैदा भयो त रु त्यसलाई हामीले पैदा गर्‍यौंै । स्त्री-पुरुषलाई एक अर्काबाट टाढा राखेर हामीले त्यसको माग पैदा गर्‍यौं । त्यो मागलाई पूरा गर्न कुनै व्यक्ति जान्छ, हामीलाई लाग्छ, गलत भईरहेको छ । त्यसैले, बाधा खडा गरिन्छ । किनकी उसको बाटोमा जति धेरै अवरोध खडा भयो, आफ्नो माग पूर्तिका लागि ऊ त्यति नै धेरै नयाँ नयाँ बाटो खोज थाल्छ । किनकी मागले पूर्ति त खोज्छ ।
को हो अश्लिल ?
छेउकै एक अष्ट्रेलियन डाक्टरले उनलाई हातले इशारा गरे र भने, बारम्बार नहेर्नुहोस् । अन्यथा, पुलिस आएर तपाईलाई यहाँबाट लिएर हिँड्छ ।
तपाईले पाँच सय व्यक्तिलाई देख्नु भएको छ, कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । कसैलाई चासो राख्न जरुरी पनि छैन । किनकी यो उनीहरुको आफ्नो कुरा हो । फेरी दुई व्यक्तिले यो उमेरमा एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् भने पाप लाग्ने कुरा नै के छ ?, यदी उनीहरुमा प्रेममा आँखा बन्द गरेर नजिक बस्छन् भने यसमा समस्या नै के छ ।
तपाइलाईर् किन समस्या भइरहेको छ ? न तपाईलाई कसैले अंगालो मारेको छ, न त कसैले तपाईलाई प्रेम गरिरहेको छ ।
त्यहाँबाट फर्केर मेरो मित्रले भने, म यति धेरै त्रसित भए की मलाई लाग्यो यी कस्ता व्यक्ति हुन् । पछि विस्तारै विस्तारै उनले पनि बुझ्दै गए की गलत उनी नै थिए । हाम्रो देश नै एक अर्काको ताकझाक गर्नमा तल्लिन छन् कि कसले के गर्‍यो, कसको घरमा को गयो इत्यादी ।
जति दबाउन खोज्यो, उति उजागर हुन्छ
यसबारे जति पनि नयाँ खोज भएका तिमीहरु उक्त खोज पढ्नु , त्यसबारे चर्चा गर्नु र सेक्सबारे बुझ्ने प्रयास गर्नु कि के हो यसको मेकानिज्म रु यसको यन्त्र के हो रुके हो यसको प्यास रु प्राणभित्र लुकेर बसेको यसको राज रु यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने । यसबारे टाढिएर कहिल्यै नभाग्नु । सेक्सको कुरा सुनेर कहिल्यै आँखा नचिम्लनु ।
बच्चाहरु त अझ बढी पिडामा छन्, किनकी उनीहरुलाई यसबारे सम्झाइदिने कसले रु कसले यसबारे बुझाईदिने रु को सित उनीहरुले कुरा राख्ने र यसको यर्थाथबारे जानकारी हासिल गर्ने ?
यौनलाई स्वस्थ्य रुपले स्विकार्नुहोस्
प्रतिभाको जन्म त त्यही दिनमात्र सम्भव छ, जुन दिन यस देशले सेक्सलाई सहज रुपमा स्वीकार्नेछ । यसलाई जीवनको एउटा तथ्यको रुपमा अंगिकार गर्नेछ- प्रेमले, मायाले । निन्दा गरेर हैन । र यसमा निन्दा गर्नुपर्ने, घृणा गर्नु पर्ने कुनै कारण पनि छैन ।
पाठेघर परीक्षण निःशुल्क